स्वामी रामदेव महाराजलाई खुला पत्र – डा.प्रकाशराज रेग्मी
मुख्य पृष्ठ » स्वामी रामदेव महाराजलाई खुला पत्र – डा.प्रकाशराज रेग्मी
म नेपालको एक मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ । तपाईले टेलिभिजनको आस्था च्यानल मार्पmत प्रदर्शन गर्नु हुने योग र प्राणायाम मैले पनि हेर्ने गरेको छु । मलाई अत्यन्तै मन पर्छ तपाईका प्रस्तुतिहरू । मैले औषधि खुवाई राखेका धेरै नै मुटुका रोगीहरूले तपाईको प्रदर्शन हेर्ने गरेका रहेछन् । धेरै नै संख्यामा मुटुका रोगीहरूले मलाई प्रश्न सोध्ने गरेका छन्– “स्वामी रामदेवले सिकाएको प्राणायाम गर्दैछु अब औषधि खान छोडे कसो होला ?’ प्रश्न सोध्ने सबैलाई मैले “प्राणायाम गर, औषधि पनि खाउँ”, भनि सम्झाउने गरेको छु । २–४ जना मेरा विरामीहरूले मलाई नसोधी तपाईको प्रस्तुतिबाट अत्यन्तै प्रभावित भएर खाई राखेको ब्लड प्रेशरको औषधि खान छोडेछन् । औषधि छाडी प्राणायमा मात्र गरेको ७ दिनमै ए कजनाको ब्रेन हेमोरेज भएछ अनि अर्को एक जनाको हृदयघात भएर मृत्यु भयो । उनीहरूका नातेदारहरू आएर मेरो अगाडि तपाईंको प्रस्तुतिबारे आक्रोशपूर्वक नकारात्मक टिप्पणीहरू गरे । मेरो चित्त साह्रै दुख्यो । आखिर तपाई योगशास्त्रलाई चिक्त्सिाशास्त्रको मूलधारमा ल्याउन यत्रो त्याग, तपस्या गरी रहनु भएको छ, लाखौं मानिसहरूले तपाईले सिकाएको प्राणायाम गरेर स्वास्थ्य लाभ गरेका छन्, तैपनि तपाईको प्रस्तुति प्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरू पनि रहेछन् यहाँ । यसबारे तपाईंलाई जानकारी होस् भनेर यो खुला पत्र लेख्ने आँट गरेको हुँ । गल्ती भए क्षमा पाउँ महाराज ।
मलाई राम्ररी थाहा छ ति मेरा रोगीहरू तपाईले सिकाएको प्राणायाम गरेर मरेका होइनन् । उनीहरूलाई कडा ब्लड प्रेशर थियो । तीनथरी औषधि खाएर मुस्किलले उनीहरूको ब्लड प्रेशर नियन्त्रणमा आएको थियो । प्राणायाम शुरू गरे तापनि औषधि खान छाड्न नहुने हो उनीहरूले । यो कुरा उनीहरूले बुझ्न सकेनन् । उल्टो तपाईले प्रस्तुत गरेको चमत्कारिक योग चिकित्सा पद्धतिबाट प्रोत्साहित भएर उनीहरूले औषधि खान बन्द गरेका हुन् । ज्यानै गयो स्वामीजी उनीहरूको । हाम्रो उद्देश्य रोग मुक्त गर्ने हो, ज्यानै जाओस् भन्ने त पक्कै होइन । यस कारण तपाइलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ आफ्नो प्रस्तुतिमा एकदुईवटा कुराहरू थपिदिनुस् अनि एक दुईवटा कुराहरू घटाइदिनुस् । तपाईंको प्रस्तुति हेरेपछि, तपाईको प्रवचन सुनेपछि रोगीहरू, योग र प्राणायाम प्रति आकर्षित हुन्छन्, यसबाट चमत्कारै पो हुने रहेछ, रोग पुरै निर्मूल हुने रहेछ भनि विसवस्त हुन थाल्दछन् । यसका साथै रोगीहरूरको एलोप्याथी औषधि प्रति नकारात्मक धारण बन्न थाल्दछ । जस्तै, औषधिहरू अप्राकृतिक हुन, क्यामिकलबाट बनाइएका हुन्, साइड इफेक्टहरू धेरै हुन्छ, एक पटक शुरू गरेपछि सधैं खाई राख्नु पर्छ, रोग नियन्त्रण गर्ने मात्रै हो निर्मूल पार्न सक्ने होइन, महँगा हुन् आदि इत्यादी । रोग पनि निर्मूल नहुने, साइड इफेक्ट पनि गर्ने अनि पैसा पनि धेरै खर्च हुने डाक्टरी औषधि किन खानु प¥यो , पैसै नलाग्ने, रोग निर्मूल पार्ने योग । प्राणायम गरे भैहाल्यो नि भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने तर्पm धेरै नै रोगीहरू उत्साहित हुन्छन् । यसैको फलस्वरूप उनीहरूले औषधि खान बन्द गर्छन् अनी तपाईको अगाडि पलेटी कसेर बसी कपाल भाती, प्राणायम गर्न थाल्दछन् । अनी केही दिनमै औषधि छाडेको नतिजा निस्कन्छ– मृत्यु । स्वामीजीलाई मैले बताएका यस्ता घटनाहरूको बारे थाहा छ कि छैन कुन्नि । थाहा छैन भने मेरो यो विनम्र अनुरोध छ कि तपाईले योग र प्राणायमको उपयोगीताको प्रचार गर्दा रोगीले खाई राखेको औषधि डाक्टरको सल्लाह बिना छुटाउने तर्पm प्रोत्साहित गरी दिनुभएन ।
उच्च रक्तचाप भएका रोगीहरूले मात्र होइन चिनीरोग र वाथ मुटुका रोगीहरूले समेत औषधि छाडी प्राणायाम गर्न थालेपछि रोग निर्मूल हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको मैले फेला पारेँ । एक जना मेरा महिला रोगी चिनी रोगद्वारा पीडित, जसको ज्भबचत ब्ततबअप भएर बाईपास सर्जरी समेत भैसकेको छ, उनले सबै औषधिहरू छाडी नियमित रूपमा व्यायाम, खानपानमा नियन्त्रण, प्राणायाम, ध्यान अनि तपाईले सिकाउनु भए अनुसार, १०० ग्राम तिते करेला, १०० ग्राम काँक्रो वा लौका र १०० ग्राम गोलभेडाको रस बनाई २ गिलास पानीमा मिसाई दैनिक पिउने गरिछन् । शुरूका दिनहरूमा निकै नै फुर्ति आएछ र स्वस्थ्य अनुभव गरिन् उनले । छाती दुख्ने गरेको समेत ठिक भएछ । तर ३–४ महिना पछि दम बढ्ने र हात, खुट्टा, मुख सुन्निने । पिसाब कम हुने भएछ । उनी म कहाँ दौडिएर आइन । सबै परिक्षण गरी हेर्दा हार्ट फेलिएर र किड्नी फेलिएर शुरू भैसकेको रहेछ, ब्लड सुगर बढेर ४०० पुगेछ । रिपोर्ट सुनाएपछि उनीले छानाबाट खसेको अनुभव गरिन अनी टाउकोमा हात राखी हत्तेरिका राम राम भनिन्, श्रद्धेय महाराज, मैले प्राणायामले बेफाइदा ग¥यो भन्न खोजेको होइन । योग र प्राणायाम स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै फाइदाजनक चीजहरू हुन् तर यसबाट मात्र रोग निर्मूल हुँदो रहेनछ भन्ने आफ्ना विरामीहरूको अनुभव तपाई समक्ष पु¥याउने प्रयास गरेको मात्र हुँ ।
अब एउटा अत्यन्तै रोचक र अचम्मको घटना महाराजलाई जानकारी गराउन गइराखेको छु । घटना १ महिना अगाडिको हो । नेपालको चितवन भन्ने जिल्लामा बेला बखत मुटुका रोगीहरूको परिक्षण गर्न जाने गरेको छु । नेपालमा टेलिभिजन गाउँ गाउँमा पुगेको छ । आस्था च्यानल पनि जहाँ तही हेर्न पाइदो रहेछ । चितवन जिल्लाको भरतपुर वडा नं. १२ मा एकजना ९ वर्षका बालक छन् । उनलाई जन्मौटे मुटुको रोग छ । उनको
मुटुमा प्वाल छ जसलाई हामी जस्ता डाक्टरहरूले ख्क्म् ९ख्भलतचष्अगबिच क्भउतब िम्भाभअत० भन्ने गर्दछौं । मैले १ वर्ष अगाडि मुटुको भिडियो (ईको) गरेर हेर्दा प्वाल १.६ से.मी. नापको थियो, अनि मुटु भित्रको चाप ९एगmियलबचथ ब्चतभचथ एचभककगचभ० ५० मि.मि. थियो । मैले तत्काल अप्रेशन गरेर प्वाल टाल्नुस् पर्छ । नत्र पछि ढिलो भएमा अप्रेशन गर्न मिल्दैन अनि ज्यान खतरामा पर्छ भनेको थिएँ । अप्रेशन खर्च १ लाख लाग्छ । काठमाडौँको सहिद गङ्गालाल अस्पतालमा लगि हाल भनेर चिठ्ठी समेत लेखिदिएको थिएँ । पैसा नपुगे नेपाल हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठानको केन्द्रिय कार्यालय वा ललितपुर हार्ट क्लिनिक पुल्चोकमा आउनु सक्दो सहयोग गरूँला पनि भनेको थिए । १ लाख रूपैँया लाग्छ भन्ने सुन्ने बित्तिकै विरामीको बाबुको निदारमा चिटचिट् पसिना आएको मैले आफ्नै आँखाले देखेको थिएँ । १ वर्षको अन्तराल पछि उनले छोरालाई लिएर म कहाँ फेरि जँचाउन आएका थिए, गएको महिना म चितवन गएको बेलामा । मैले इको गरेँ फेरि उनको मुटुको जाँच गरेँ । मुटुको प्वाल जस्ताको तस्तै थियो, मुटु भित्रको चाप भने ८० मि.मि. पुगिसकेको रहेछ साथै च्ष्नजत तय ीभात क्जगलत भैसकेको रहेछ जुन अप्रेशन गर्न नमिल्ने अवस्था हो । मैले बाबु चाहीलाई गाली गरेँ किन छोराको अप्रेशन नगराएको भनेर । उनको उत्तर सुनेर म मात्र होइन तपाई पनि चकित पर्नु हुनेछ महाराज ! उनले भने– “मेरो छोराले दैनिक ३ पल्ट स्वामी रामदेव महाराजले भन्नु भएको छ कपालभाती प्राणायाम गरेको खण्डमा जस्तो सुकै मुटुको रोग पनि ठिक हुन्छ रे । म गरिबले अप्रेशन गर्न कहाँबाट १ लाख रूपैया जुटाउने ? पहेलो धोती लगाउने, छाती पेट देखाएर कपालभाती प्राणायाम सिकाउने डाक्टर योगीले सिकाएको उपचार गर्न १ पैसा पनि खर्च नहुने रै’छ त्यसकारण छोरालाई दैनिक १ पल होइन विहान, दिउँसो र बेलुका ३०–३० मिनेट कपालभाती प्राणायाम गराउँछु । अब तपाईले भनि दिनुप¥यो मुटुको मिडियो गरेर–मेरो छोराको मुटुको प्वाल टालियो कि टालिएन ?” स्वामीजी अब तपाईंले नै भनि दिनुस् मैले के उत्तर दिने । १ वर्ष अगाडिसम्म अप्रेशन गराएको भए पूर्णरूपले निको हुने यो जन्मौटे मुटुको रोग व्यायाम, प्राणायामको बाटोमा अन्धो भएर लाग्दा अप्रेशन गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुग्यो । अब यो बच्चाको अप्रेशन कुनै पनि सर्जनले गर्दैन किनकी यो अवस्थामा यस्तो रोगको अप्रेशन सफल हुँदैन । यस्ता संवेदनशील र जटिल कुराहरू आधुनिक चिकित्सा प्रणालीको विकासबाट थाहा हुन् सकेको हो । योगशास्त्रमा जन्मौटे मुटुको रोगीको मुटु भित्रको चाप नाप्ने र च्ष्नजत तय षित क्जगलत नाप्नेबारे कतै उल्लेख गरिएको छैन । हुनत म आधुनिक चिकित्साशास्त्रको विद्यार्थी भएको हुनाले योगशास्त्रका कुरा मैले थाहा नपाएको पनि हुनसक्छ । तपाईले सिकाउने गरेको विद्यामा यी कुराहरू छन् भने बताइदिनु प¥यो महाराज । मुटुको प्वाल कपालभाती प्राणायामले होइन अस्पतालमा गएर जतिसक्यो चाँडो चक्कु, सियो धागोले टाल्नु पर्छ भनेर आफ्ना भक्त रोगीहरूलाई भनि दिनु प¥यो । नत्र भने म जस्तो डाक्टर र मुटुको प्वाल कपालभाती प्राणायामद्वारा टालिन सक्छ भनि भन्ने विशवासमा दैनिक ३ पल्ट कपालभाति प्राणायम गर्ने ति बालक जस्ता मुटु रोगीहरूले दुःख पाउने भए महाराज । बिन्ति छ हामी जस्ताको कल्याण गरिदिनु प¥यो महाराज ।
श्रद्धेय स्वामीजी, मैले डाक्टरी पास गरेपछि हिप्पोक्रेटिक सपथ खाएको छु । रोगीलाई गलत बाटो देखाउने छैन निस्वार्थ सेवा गर्ने छु भनि प्रण गरेको छु । मलाई आफ्नो बाटोमा हिंड्न मद्दत गर्नोस् महाराज ।
तपाईको भक्त डा. प्रकाशराज रेग्मी
मुटुरोग विशेषज्ञ, ललितपुर
buddha sharan lama says:
rahnatmak lekh ko lagi thanks Dr Regmi
This post द्धारा लिखित काव्यसुधा डट कम on Friday, August 13, 2010, 5:40. काव्यसुधा डट कम has written 594 posts on this blog.
Posted in पत्र साहित्य
This post has 1 प्रतिक्रिया. Write your own comment now.
1,491 views on this post